သူမရဲ့နအေိမျမှာ ညအခြိနျမတျောကွီး ကွုံတှခေဲ့ရတဲ့ ထိတျလနျ့စရာဖွဈရပျ တဈခုကိုရငျဖှငျ့ွေ ပာပွလာခဲ့တဲ့ ရှရေညျသိနျးတနျ – Shwe Likes
မွနျမာသံ စဉျသီခြ ငျးလေးတှေ နဲ့ပရိသတျ အားပေးမှုတှေ ရရှိကာအောငျွ မငျနတောကေ တာ့ ရှရေညျသိ နျးတနျပဲဖွဈပါတယျ။ သူမ ကတော့ နာမညျကြျော အဆိုေ တျာ တှံတေး သိနျးတနျရဲ့သမီးလွေး ဖဈပါတယျ။
ဖခငျမရှိေ တာ့ပမေယျ့သမီး ကိုပဲပရိသ တျတှေ အားပေးနရေတာပါ။ တိုးတကျလာ တဲ့ခတျွေ ကီးထဲမှာ မွနျမာသံစ ဉျတှကေပြောကျကှ ယျလုနီးပါးဖွ ဈခဲ့တာပါ။
ဒါပမေယျ့လညျး သူမဟာမွနျမာမှုကိုမွ တျနိုးတဲ့အမြိုး သမီးဖွဈတာေ ကွာငျ့လေးစားဂုဏျ ယူနရေတာပါ။ လူမှုကှနျရ ကျလညျးသုံးပွီး ပရိသတျတှေ နဲ့မပွတျ ရှိနတောကွောငျ့လညျးအားပေးမှုတှေ ရရှိနတောပါ။
အခုမှာ လညျးသူမကွုံေ တှ့ခဲ့ရတဲ့သ တိထားစရာကိစ်စ တဈခုကိုလူမှုကှနျရကျကေ နပရိသတျတှအေတှ ကျဝမြှေခဲ့တာပါ။ ဒီလို ညဖကျအခြိနျ..ဘယျလော ကျရငျးနှီးတဲ့ customer ဖွဈပါစေ.ဘာကိစ်စရှိရှိေ ယာကျြား တှေ ခညျြး ၄.၅ ယောကျ လူတစုနှငျ့ အတူလာ သငျ့မလာသငျ့စဉျးစားပေးပါ ရှငျ.
ကြှနျမဘယျလော ကျသဘောကောငျးေ ကာငျးလုံခွုံေ ရးအရအလှနျအ ကြူးဘ ယျသူ့မှအား မနာ..ခွံတံခါမဖှ ငျ့ပေးပါဘူးဆိုပွီးပွော ပခဲ့တာပါ။ ပရိသတျတှလေ ညျးသူ့လိုအဖွဈကို သတိထားနိုငျဖို့အ တှကျတငျဆကျေ ပးလိုကျရပါ တယျ။ Credit ; Cele Thadin
မြန်မာသံ စဉ်သီချ င်းလေးတွေ နဲ့ပရိသတ် အားပေးမှုတွေ ရရှိကာအောင်ြ မင်နေတာကေ တာ့ ရွှေရည်သိ န်းတန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ သူမ ကတော့ နာမည်ကျော် အဆိုေ တာ် တွံတေး သိန်းတန်ရဲ့သမီးလြေး ဖစ်ပါတယ်။
ဖခင်မရှိေ တာ့ပေမယ့်သမီး ကိုပဲပရိသ တ်တွေ အားပေးနေရတာပါ။ တိုးတက်လာ တဲ့ခေတ်ြ ကီးထဲမှာ မြန်မာသံစ ဉ်တွေကပျောက်ကွ ယ်လုနီးပါးဖြ စ်ခဲ့တာပါ။
ဒါပေမယ့်လည်း သူမဟာမြန်မာမှုကိုမြ တ်နိုးတဲ့အမျိုး သမီးဖြစ်တာေ ကြာင့်လေးစားဂုဏ် ယူနေရတာပါ။ လူမှုကွန်ရ က်လည်းသုံးပြီး ပရိသတ်တွေ နဲ့မပြတ် ရှိနေတာကြောင့်လည်းအားပေးမှုတွေ ရရှိနေတာပါ။
အခုမှာ လည်းသူမကြုံေ တွ့ခဲ့ရတဲ့သ တိထားစရာကိစ္စ တစ်ခုကိုလူမှုကွန်ရက်ကေ နပရိသတ်တွေအတွ က်ဝေမျှခဲ့တာပါ။ ဒီလို ညဖက်အချိန်..ဘယ်လော က်ရင်းနှီးတဲ့ customer ဖြစ်ပါစေ.ဘာကိစ္စရှိရှိေ ယာက်ျား တွေ ချည်း ၄.၅ ယောက် လူတစုနှင့် အတူလာ သင့်မလာသင့်စဉ်းစားပေးပါ ရှင်.
ကျွန်မဘယ်လော က်သဘောကောင်းေ ကာင်းလုံခြုံေ ရးအရအလွန်အ ကျူးဘ ယ်သူ့မှအား မနာ..ခြံတံခါမဖွ င့်ပေးပါဘူးဆိုပြီးပြော ပခဲ့တာပါ။ ပရိသတ်တွေလ ည်းသူ့လိုအဖြစ်ကို သတိထားနိုင်ဖို့အ တွက်တင်ဆက်ေ ပးလိုက်ရပါ တယ်။ Credit ; Cele Thadin